BBC Somali - Warar - Jubadda hoose oo degan dagaalkii shalay kadib
Jubadda hoose oo degan dagaalkii shalay kadib
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 September, 2012, 04:50 GMT 07:50 SGA
Waxaa degan goobihii ay shalay ku dagaalameen ciidamada dalka Kenya ee hadda hoos taga kuwa AMISOM oo ay la socdaan kuwa dowladda ku meelgaarka ah iyo kuwa Raas-Kambooni, kuwaas oo ka soo horjeeda ciidamada kooxda al-Shabab.
Dhinaca ka soo horjeeda al-Shabaab ayaa sheegay in ay kooxdan ka dileen ilaa afar askar ayna ka qabsadeen fariisamaha ay weerarka ku qaadeen, balse al-Shabab ayaa sheegtay in ay weerarka ciidamada huwanta ah iska caabisay.
Wararka madaxa bannaan ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka geeriyooday ilaa afar qof, iyadoo qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya in labada dhinacba ay isku ciidan uruursanayaan hadda oo gurmadyo ay gaarayaan.
Magaalada Kismaayo ayaa ah goobtii ugu dambaysay ee magaalo wayn ah oo istartiiji ah, isla markaana uu dhaqaalo xoog leh ka soo gali jiray al-Shabab.
Muddo dhowr bilood ah, ayay weerarku hayeen gobolka Jubada Hoose si ay u qabsadaan magaalada Kismaayo ciidamada dowladda Kenya oo hadda hoostaga kuwa AMISOM oo ay la socdaan ciidamo ku dowladda Soomaaliya ah iyo kooxda Raaskambooni oo horay uga tirsanayd al-Shabab